Kudya nokuda kwepamuviri mudumbu
Kune vakadzi vakawanda, zvakavanzika zvemuviri wakadzika uye unoramba wakavanzika. Ndiyo munharaunda iyi iyo mafuta ndiyo yakasindimara, uye kazhinji kunyange kushungurudza kunobatsira hakugoni kuita kuti kuipa kwemaitiro kusakanganise kana kuti zvishoma kubvumirana. Zvisinei, kana iwe ukamatira kune chimwe chikafu chakakosha chepamuviri mudumbu, dambudziko iri rinogona kugadziriswa.
Kana iwe uine mubvunzo pamusoro pekudya kuti uwane dumbu rakadzika, rinongotaura chete kuti panguva iyo uri kudya nzira isina kururama, uye kana iwe uchiramba uchiita izvi, dumbu rako richava mumamiriro akafanana. Sezvo iwe unogona kuwana dumbu rakapfurikidza nekudya kwenguva pfupi kwenguva pfupi chete, zvimwe zvikamu zvegadziriro yezvokudya zvinofanira kuitwa nguva dzose.
Semuenzaniso, yeuka izvi zvokudya-vavengi nekuda kwepamuviri mudumbu uye uzvibvumira iwe pachako kazhinji katatu pamwedzi kwechikamu chimwe chiduku:
kubika, mikoro mutsvuku, chero mapeji, confectionery, keke, mafura, kusanganiswa kwehupfu nenyama;
zvokudya zvinokurumidza, zvokudya zvakabikwa, zvose zvakabikwa zvakadzika-zvakabikwa;
chero zvigadzirwa zvinokonzera shuga - mukakati wekisi, sweet soda, nezvimwewo.
Kana iwe ukasabvisa ivo kubva pakudya, funga kuti hafu yehondo yakatoitwa. Vamwe vose vachaita chikafu chakanaka: zvizhinji zvezviyo, michero, miriwo uye nyama yakaderera-mafuta, hove uye huku. Kwekudya - jelly, marshmallow, yogurt. Uye, zvechokwadi, anodya muzvikamu zviduku zvishanu pazuva!
Zvokudya zvemuviri wakadzika: mamiriro ekufungidzira kwezuva
Kuita kuti urongwa hujekese, isu tichagadzira menyu yezuva:
kambamambakwedza - ndiro yezvimwe zviyo, chibereko;
yechipiri kamufambidzani - chai pasina shuga, sandwich nechesi;
kudya kwemanheru - ndiro yepasi-e-soup fat, saladhi yemiriwo;
pakati - mangwanani mangwanani -girasi-girasi ye yogurt ine fiber (inotengeswa paresmiti) nemichero;
Kudya (3-4 maawa asati avata) - mupunga nemiriwo uye hove (huku).
Sezvaunogona kuona, hazvifaniri kuve nenzara. Zvakakosha kuti shumiro imwe neimwe inopindirana neplate yakawanda yepeetesi - izvi zvichakuchengetedza kubva pakudya zvekudya uye kubatsira kubvisa mimba yako flat!
Nzira yekukurumidza kugadzirisa dumbu sei?
Kana iwe ukarota kuwana dumbu rakadzika kwemwedzi, kumwe kudya kumwe chete hakufaniri kuverengwa. Izvozvo, zvechokwadi, zvinopa simba, asi kwete nokukurumidza sezvaunoda. Ndicho chikonzero nei zvakakosha kushamwaridzana nemitoro yakareruka - inomhanya (unogona kunyange kumhanyira panzvimbo yacho), kutumbuka tambo kana kushandura hoop.
Itai zvakakwana 3-5 nguva pavhiki kwemaminitsi 30-40 chete. Iva nechokwadi, denga rakadzika uye chiuno rinokosha kuti uzvikunde iwe kazhinji pavhiki. Uyezve, kuputika kwehangu kana kumhanya panzvimbo iyo kunogona kusanganiswa nekuona iwe unofarira TV.
Kurema kwekureruka kunodhura: zuva rokubiridzira
Kudya kwe hypothyroidism
Bonn soup: kudya
Buckwheat kudya - pros uye cons, zvinotonga uye mapeji
Zvokudya zveMayo Clinic pane zvakasiyana-siyana zvinopisa mafuta
Menyu kubva kune anodya noutano Svetlana Fus
Kudya kweEstonia ndiko kudya kwakakosha kwekukurumidza kuora kurasikirwa
Kudya kwegastritis - mapoka
Yakanga yakaonda sei Maria Bugun?
Nguva yekutarisira amai
Matongo eZedze Castle
Mutungamiri Charles akaudza mutariri Ed Chiran neChirongwa cheBritain
Diuretic herbs - kushanda mumishonga yevanhu
Dzidzira maitiro - zvinopesana
Jikoni yakagadzirwa ne sofa
Ijasi rakadzika rine hood yakaitwa nehuni
Nzvimbo dzisina kunaka dzenyika
Orlando Bloom inosangana neshamwari yepedyo yeMiranda Kerr?
Zvipfeko mukutaridzika kwema70s
Zvipfeko zvevana vanoyamwisa
Casey Affleck pakupedzisira anoramba mudzimai wake Summer Phoenix
Kabichi nenyama mune multivariate
Crustaceans mu aquarium
Nzira yekudzinga sei dhimoni kubva mumunhu?
Chii chingaunza kubva kuBerlin?
Kugara mukofi matafura